CopyQ 4.1.0: Inona no vaovao ao amin'ny manager clipboard mandroso | Avy amin'ny Linux
CopyQ 4.1.0: Inona no vaovao ao amin'ny manager clipboard efa mandroso
Linux Post Install | 21/08/2021 06:00 | fampiharana, Tutorials / Manuals / Tips
Raha jerena izany, 2 taona mahery lasa izay dia nandinika ny a fitaovana milay sy ilaina antso "CopyQ" fony izy tao aminy 3.5.0 version, anio dia hizaha izany isika vaovao mitondra antsika ny farany ary ankehitriny stable Version 4.1.0.
Ho an'ireo tsy mahalala "CopyQ", iray ity rindranasa apike izay miasa toy ny manager clipboard mandroso miaraka amina asa fanovana sy fanoratana.
Ary toy ny mahazatra, alohan'ny hidiranao tanteraka amin'ny lohahevitra, ho an'ireo liana amin'ny fitaovana amin'ity karazana ity, izany hoe, mpitantana clipboard mandroso, fa ho an'ny terminal (consoles) hanoro hevitra izahay hizaha ny lahatsoratra teo aloha mifandraika miaraka amin'io lohahevitra io. Ary noho izany dia hiala eo ambany ny rohy mankany aminy izahay:
"Xclip dia rindranasa ahafahantsika mampiditra lahatsoratra amin'ny solaitrabe ary haka azy avy ao amin'ny tsipika fibaikoana. Ny rindrambaiko nalaina dia mety nisy fampiharana hafa nidira. Toy izany koa, ny lahatsoratra ampidirina ao amin'ny solaitrabe amin'ny alàlan'ny xclip dia azon'ny fampiharana hafa ampiasaina. Xclip: Manipulate le clipboard avy amin'ny tsipika baiko." Xclip: Manara-maso ny solaitrabe avy amin'ny tsipika baiko
xclip: Manipulasi ny solaitrabe avy amin'ny tsipika baiko
1 CopyQ: kinova vaovao misy fiasa vaovao
1.1 Inona no atao hoe CopyQ?
1.2 Endri-javatra ankehitriny
1.3 Inona no vaovao amin'ny kinova 4.1.0 ankehitriny
1.4 Sarin'ny sary
CopyQ: kinova vaovao misy fiasa vaovao
Inona no atao hoe CopyQ?
"NAn-cross-platform mandroso sy mpitantana clipboard loharano misokatra izay misy asany toy ny tantara, fikarohana ary fanovana, miaraka amin'ny fanohanana ny lahatsoratra, HTML, sary, ary ny endrika fanao manokana. CopyQ dia manolotra fiasa fanovana sy fanoratana. Araho maso ny tabilao rafitra ary tahirizo ny atiny ao amin'ny torolàlana manokana. Ny takelaka voatahiry dia azo adika mivantana ary apetaka amin'ny fampiharana rehetra."
CopyQ - mpitantana tabilao misy endri-javatra mandroso
La Andian-tsarimihetsika «X CopyQ» mampiditra ao amin'ireo maro ao aminy endri-javatra fototra ankehitriny ireto manaraka 10 ireto:
Manolotra fanohanana amin'ny sehatra hafa ho an'ny Linux, Windows, ary OS X 10.9 ary avo kokoa.
Mitahiry lahatsoratra, HTML, sary na endrika amam-panao hafa.
Hizaha haingana sy sivana ireo tantara tantara an-tsarimihetsika.
Izy io dia ahafahana manasokajy, mamorona, manova, mamafa, mandika / mametaka ary misintona singa ao amin'ny interface-ny.
Manome ny fahaizana manampy naoty na tag amin'ny zavatra voatantana.
Izy io dia manana hitsin-dalana manerana ny rafitra misy baiko azo ovaina.
Fanamaivanana ny fametahana entana amin'ny hitsin-dàlana na avy amin'ny lovia na ny varavarankely lehibe.
Izy io dia manana endrika azo ovaina tanteraka.
Izy io dia manana interface sy script script.
Tohano amin'ny fanovana sy hitsin-dàlana tsotra toy ny Vim.
Inona no vaovao amin'ny kinova 4.1.0 ankehitriny
Raha, ny kinova ankehitriny ambanin'ny laharana 4.1.0 Daty 23 / 04 / 2021 mitondra antsika amin'ireo fiasa vaovao marobe, ireto manaraka 10 ireto:
Ny rafitra fampandrenesana taloha dia azo ampiasaina izao fa tsy fampandrenesana an'ny teratany / rafitra. Ity dia azo sintomina ao amin'ny takelaka fampandrenesana ao amin'ny preferences.
Ny rakitra fikirakirana fanampiny ho an'ny fampandrenesana dia tsy foronina ho azy.
Ao amin'ny script, ny object console dia azo ampiasaina amin'ny fitrandrahana ala, fandrefesana ny fotoana laniana ary hanamafisana ny fepetra.
Ny menio famenoana baiko dia misy lisitra feno kokoa momba ny zavatra / fiasa zavatra / script ary famaritana tsara kokoa.
Ny baiko sy ny baiko momba ny hetsika izao dia aza manolo ny% 2 ho an'ny% 9. Ary izany dia mamela ny mandalo URL tsy mila mandositra ny endri-tsoratra voahodidra toy ny% 20 na% 3A.
Fanasongadinana ny syntax ho an'ny soatoavina hexadecimal sy boolean ao amin'ny tonian-dahatsoratra.
Manitsy ny fihetsiky ny varavarankely lehibe amin'ny efijery hafa.
Amin'ny Windows: Tsy mandeha ny fampandrenesana zanatany amin'ny Windows 7. Manamboatra ny fianjerana noho ny fiasa tsy manohana. Ary nanamboatra fianjerana rehefa nametraka lohahevitra sasany.
Ho an'i Wayland: Mamerina ny géometry farany voatahiry ho an'ny varavarankely (satria tsy mandeha ny fakana takelaka ankehitriny).
Hita indray ny fananganana MinGW Windows (tsy misy ny fanohanan'ny fampandrenesana teratany).
Aorian'ny fametrahana antsika amin'ny baiko baiko manaraka, izao no fijerintsika "CopyQ" mihazakazaka ao amin'ny GNU / Linux Distro:
«flatpak install flathub com.github.hluk.copyq»
naoty: Raha mila fomba fametrahana hafa dia zahao ity manaraka ity rohy.
Raha mila vaovao misimisy kokoa momba ny fampiasana "CopyQ", na avy amin'ny interface interface, na amin'ny alàlan'ny tsipika baiko, tsarovy ny mitsidika ny fidirana teo aloha tamin'ny "CopyQ" na zahao ireto rohy manaraka ireto:
Tranonkala ofisialy ao amin'ny GitHub
Fizarana farany navoakan'ny GitHub
Ary tsarovy fa:
"Satria clipboard io dia hanomboka hiasa ny fampiharana efa vantany vao manitsy antontan-taratasy iray na mivezivezy amin'ny harato isika." CopyQ - mpitantana tabilao misy endri-javatra mandroso
Raha fintinina, toy ny efa hita "CopyQ" dia safidy mahasoa izay hanome anao GNU / Linux Distro una fitaovana fitantanana mandroso, raha tsy te hampiasa ilay rindranasa default ianao, izay mazàna mampiasa ny rehetra Distro y Tontolo iainana Desktop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » CopyQ 4.1.0: Inona no vaovao ao amin'ny manager clipboard efa mandroso
ROS: Rafitra miasa ho an'ny Robots - rafitra loharano misokatra
Loc-OS sy Cereus Linux: fomba hafa sy respin mahaliana an'ny antiX sy MX